Shiinaha PVC PVC dahaarka leh warshad silig laba geesood ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | XINTELI
Mesh silig laba geesood ah
Galvanized mesh silig laba geesood ah
PVC mesh silig laba geesood ah
Xayndaabka Isku xidhka silsiladda
PVC shabag silig laba geesood leh dahaarka leh
Mesh silig galvanized
PVC daahan alxanka shabag silig ...
Guntin go'an oo xiiran xayndaabka
Nooca Badeecadda: PCV mesh silig laba geesle ah oo dahaarka leh
Waxyaabaha: silig bir bir ah oo dahaadhan tayo sare leh, silig bir ah oo kaarboon hooseeya
Daaweynta Dusha: PVC Dahaarka leh
PCV dahaarka mesh silig laba geesood ah waa aslo loo yaqaan chinken netting.Pvc dahaarka silig hexagonal dahaadhay ka samaysan yahay steel steel steel low.With qalooca toosan, mesh silig laba geesoodka hevagonal loo isticmaalo sida digaagga netting.Pvc lakabka difaaca si weyn u kordhinta nolosha adeegga shabakadda, anti-ultraviolet, gabowga iyo cimilada doorbidista xulashada midabada kaladuwan ayaa qurxin kara jawiga ku hareeraysan Caadi ahaan, midabka caanka ah ayaa ah mesh silig digaag digaag leh oo diiran.
Mesh silig laba geesood ah oo caag ah oo nooc ah shaashad, oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha petrochemical, dhismaha, biyo dhaqashada iyo wixii la mid ah. Sida dhismaha derbiyada go'an, xoojinta saxanka la taaban karo ee dhulka, ilaalinta kuleylka, kuleylka kuleylka; Warshadda tamarta tuubbada ku duuban, ilaalinta kuleylka , qaboojiyaha, ilaalinta hoyga, ilaalinta dhirta.Can sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhaqo digaagga, shinbiraha, bakaylaha iyo qalimaanta kale ee xayawaanka.
Nooca Ganacsiga: Shirkadda Warshad & Ganacsi
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan: silig mesh, xayndaabka birta
Sanadka la Aasaasay: 2008
Shahaadada: TUV, ISO9000
Goobta: Hebei, Shiinaha (Dhul Weyn)
Cabbirka mesh: 1 ``, 1/2 '', 5/8 ``, 3/4 '', 2 ``
Qiyaasta Wire: 0.9mm ~ 2.0mm
Dhererka: 5m, 10m, 25m, 30m, iwm.
Ballaaran: 0.5m ~ 1.5m
Astaamaha: Daxalka u adkaysta, miridhku u adkaysto, qiiqa u adkaysta, si fudud isu soo urursado.
Tacliiq: Qiyaasaha marka laga reebo kuwa aan kor ku soo sheegnay waxaa laga yaabaa in la dalbado kadib markii la xaqiijiyay.
qafis digaag, xayndaabka beerta, garoonka carruurta, qurxinta kirismaska.
Isticmaalidda habboon, nolol adeeg dheer, xoog difaac sare, keydso kharashka gaadiidka, dabacsanaanta wanaagsan.
Waqtiga Hogaaminta: 15 ~ 30days
Xirmooyinka: a Duubabka, ku duudduubay warqad caddayn biyo ah ama ku duudduuban oo duudduuban
c. Qaab kale oo wax lagu duubo ayaa laga yaabaa in la aqbalo xaqiijinta kadib
Habka Bixinta: T / T, Advance TT, Paypal Iwm
Waxaan diiradda saarnaa arimahan sanado badan waxaanan leenahay khibrad badan oo ku saabsan mesh silig iyo xayndaabka biraha. Dhamaan wax soo saarkyagu waxay ka samaysan yihiin wax soo saar tayo sare leh. Qiimahayagu waa macquul.Waxaan jeclaan lahayn inaan ku hayno tayada ugu sareysa macaamiisha kasta ee adduunka ka socda.
Hore: Mesh silig galvanized
Xiga: Galvanized mesh silig laba geesood ah Xayndaabka Xayawaanka
Galvanized mesh silig laba geesood ah Xayndaabka Xayawaanka
Aqoonta mesh silig alxan leh
Bandhiggu aad ayuu muhiim ugu yahay shirkadeena
No.29, Taihua Street, Shijiazhuang, Shiinaha